Tsy Misy Firenena Ho An’ireo Ankizy Tsy Manana Ray ao Bhutan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Marsa 2016 3:15 GMT
Bhutan, firenena iray ao amin'ny faritr'i Himalaya, misy mponina manakaiky ny 750.000 eo, dia fantatra amin'ilay fehezanteny hoe “fiadanam-pirenena faobe”— teny faneva noforonina tany amin'ny 1972 tany mba hanehoana ny fanolorantenan'ny firenena hanaraka ny fitaizana ara-panahy Bodista fa tsy ny fivoarana ara-materialy entin'ny Tandrefana. Ny lalàna henjana ao Bhutan momba ny zompirenena, dia tsy nanao zavatra betsaka hanosehana ny fiadanana amin'izao androntsika izao, satria noho ireo lalàna maro ao Bhutan dia an'arivony maro ireo ankizy Nepale nilaozan'ny rainy no nanjary olona tsy manana firenena niaviana.
Lazain'ny lalàm-panorenan'ny firenena fa :
Ireny reny ireny sy ireo ankizy tsy misy ray no mandoa ny sandan'ny fidorohana toaka tsy mitsahatra mitombo ao, sy ny fampiasàna mivilana ny fombandrazana efa tranainy be mandeha mampiaraka amin'ny alina, antsoina hoe “Night Hunting,” (Fihazàna amin'ny Alina), fanalahidy roa fototra ao ambadiky ny fitomboan'ny trangan'ny fanaovana firaisana ara-nofo tsy voaaro mialoha ny fanambadiana.
Tsy azo antoka izay hanjo ireny ankizy ireny noho ny fahataràn'ny dingana fanoràtana anarana ao Bhutan rehefa tsy vitan'ny reny iray ny mamantatra izay rain'ny zanany. Voararan'ny lalàna ao Bhutan ny fanalànjaza raha tsy ohatra angaha ka nisy tranga fanolànana, firaisana tamin'olompady, aretin-tsaina, na loza mitatao amin'ny ain'ilay reny. Vokany, marobe ireo vehivavy no miditra amin'ny fanalànjaza tsy araka ny lalàna, na miampita sisintany mankany India mba hampiato ny fitondràny vohoka.
Manoratra ao amin'ny bilaoginy i Yeshey Dorji:
Sonam Ongmo manoratra ao amin'ny bilaoginy :
Yeshey Dorji manoratra hoe :